Ahoana no fiasan'ny toerana matetika iOS 7 | Vaovao IPhone
Buzz be dia miforona amin'ny serivisy Locations Matetika an'ny iOS 7. Namaky lahatsoratra mampatahotra be aho miaraka amin'ny lohateny tabloid sy ny fampahalalana izay tsy hita taratra izay tena serivisy. Ny ankamaroan'ny lahatsoratra dia mihevitra an'ity serivisy ity ho fandrahonana ho an'ny tsiambaratelo momba ny angon-drakitra momba anay, zavatra lavitra ny tanjony. Noho izany dia hanazava ny fomba fiasan'izy ireo izahay sy ny vokatr'izany eo amin'ny fitaovantsika.
Raha te hijery ny antsipirian'ny serivisy na hampavitrika sy hanafoanana azy dia tsy maintsy mandeha any amin'ny Settings> Privacy> Toerana> Serivisy ho an'ny rafitra isika. Ery ambany no ahitantsika ny safidy Locations Matetika. Raha miditra ao amin'ny menio misy azy isika dia hahita safidy roa samy hafa:
Toerana matetika: mampihetsika na manafoana ny serivisy
Hatsarao ny sarintany: Avelao i Apple hampiasa an-tsokosoko ny angoninay hanatsarana ny fampiharana Maps.
Eo ambanin'ireo safidy ireo dia ho hitantsika ny toerana nisy antsika, ary ho hitantsika koa hoe impiry isika no tao amin'io toerana io. Raha tsindrio ny misy dia ho hitantsika sari-tany misy antsipiriany bebe kokoa sy ny adiresy marina izay nisy anay. Raha misafidy ny iray amin'izy ireo isika dia homena lisitra miaraka amin'ireo vanim-potoana nahitana antsika teo, miaraka amin'ny daty sy ora marina. Fa inona izany? Ohatra, mba hanehoan'ny Center Notification antsika hoe hafiriana vao tokony hiasa isika rehefa mifoha maraina.
Rehefa mamaky an'io ny olona dia mety lojika fa ny zavatra voalohany eritreretina dia hoe misy olona afaka mampiasa izany fampahalalana manokana izany ho tombontsoany. Ny zava-misy dia tsy hampiasan'i Apple an-tsokosoko izany data izany, tsy ampifandraisiny amin'ny anarana na ny anarany, ary raha mbola manome alalana azy izahay hanao izany. Mijanona ao amin'ny fitaovantsika ireo fampahalalana ireo ary tsy ampiasain'ny olon-kafa. Mety hitera-doza ho an'ny fiainantsika manokana ve izany? Tsy latsa-danja kokoa. Na dia mametra-panontaniana be aza ny vaovao farany momba ny PRISM raha hajaina ny tsiambaratelon'ny mpampiasa, azo antoka fa misy fomba maro hafa hahafantarana hoe aiza isika amin'ny fotoana rehetra nefa tsy mila mampiasa ireo Toerana Matetika an'i Apple. Ary raha, na eo aza izany rehetra izany, tsy atokisanao izany dia tokony hofarananao fotsiny ilay izy.
Fanazavana fanampiny - Sintomy ny iOS 5 Betas 7 ho an'ny iPhone sy iPad
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Ahoana ny fomba fiasan'ny iOS 7 toerana matetika
Amin'ny iPhone 4 misy beta farany tsy azoko
Niseho tamiko tamin'ny beta teo aloha ihany koa izy io ary ankehitriny dia tsy miseho amin'ny iphone 4 koa izy io.
Aza adino fa raha te-hanafika ny fiainana manokana izahay dia avelantsika eny amin'ny habakabaka satria mifandray amin'ny zavatra rehetra foana isika, azo antoka ny mametraka ios7 amin'ny iphoe5 nefa tsy mpamorona.
Sary vaovao an'ny iPhone 5C mena